> Resource> Igwefoto> otú ndozi iPhone Igwefoto Roll Crash na Photo Loss
iPhone igwefoto mpịakọta mkpọka?
iOS 5 na iPhone 4S e ji ọzọ na ndị ọzọ n'oge. E wezụga batrị nsogbu, ọzọ nke ọrụ e izute kasị bụ banyere igwefoto mpịakọta mkpọka. Tthe oge ị na-agbalị iji nweta ọ bụla nke gị photos, ma ọ bụ mgbe ị na-agbalị gbaa onye ọhụrụ, ngwa dị nnọọ mkpọka. Ọ na-akpali gị crazy!
Ụzọ kasị mma idozi nke a igwefoto mpịakọta okuku bụ na-ehichapụ gị ugbu a ntọala site na-eweghachiri ụlọ ọrụ ntọala ngwaọrụ gị. Ị nwere ike ida niile foto na ị na nọ na gị iPhone, ma ị ga-azụ a ọhụrụ igwefoto.
Olee otú na-azụ photos mgbe a igwefoto mpịakọta okuku
Ọ bụrụ na ị kpam kpam ofu igwefoto mpịakọta okuku nke site na-eweghachiri ụlọ ọrụ ntọala, congratuations! Iji nweta azụ photos na ị na emerịrị tupu bụ ezigbo mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na iTunes ọrụ.
Niile ị chọrọ bụ a mgbake ngwá ọrụ na-enyere gị aka naghachi ehichapụ igwefoto mpịakọta photos. Wondershare Dr.Fone Maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) dị otú ahụ a ngwá ọrụ, na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS, niile iPads na iPod emetụ 5/4.
Download free ikpe version n'okpuru ego gị ehichapụ photos n'ihu gị naghachi ha.
Step1. Họrọ nri ngwaọrụ ndekọ na ike iṅomi
Free download usoro ihe omume ma wụnye ya na gị na Mac. Mgbe na-eme nke a, adịghị jikọọ na ngwaọrụ gị iTunes, iji zere overwriting aga na data.
Ke akpan window, i nwere ike inwe ihe karịrị otu ndia maka ngwaọrụ gị. Họrọ onye ị chọrọ na-anọgide na-esonụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na e ọtụtụ opions n'ihi na gị iPhone, họrọ onye na a na-adịbeghị anya ụbọchị.
Step2. Naghachi furu efu photos
Ugbu a niile foto na-hụrụ na i nwere ike ihuchalu ha ebe a. Ego ndị ị chọrọ na ịrụ mgbake na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Ihe bụ ihe ọzọ, ị ga-chọpụtara na e nwekwara kọntaktị, ozi, na-akpọ akụkọ ihe mere eme na ndetu. Ee, nke a iPhone data mgbake na-enyere gị aka ịchọta azụ ndị a ọdịnaya maka ngwaọrụ gị. Ekwela ka ndị ọzọ iṅomi gị Mac na ụdị omume, ma ọ bụ gị nzuzo ga-leaked. :)
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si iPhone